3 Dalool Casri ah Mate Madaw Tubooyinka Musqusha ee Baahsan 2 Waxay Qabtaan Tubooyinka Macmacaanka
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / 3 Hole Modern Matte Black Widespread Bathroom Faucets 2 Handles Bathroom Vanity Faucets
BULSHO BADAN & JOOJINTA LAHAYN KARO
360 ° Bilaash Hadalka Siiriya qasabadaha wax aan jirin
From 6 illaa 16 inji ballaaran qasabada musqusha 3-dalool sii kordhaya, masaafada ayaa lagu hagaajin karaa shuruudahaaga dhabta ah.
Raaxo-furaha hooseeya ee a saafi ah oo madow, Naqshad naqshadeysan oo laba jibbaaran oo gaar ah oo ku habboon abuurista qaab qurxin casri ah oo casri ah.
Qabashada toosan ee naqshadeynta ergonomics, cabir ku habboon oo ku habboon xakamaynta, raaxo leh in la rogo.
Waxay ku habboon tahay guri kiro ah, kondho cusub, hal guri, guri mooto, isjiidka socdaalka, iyo isticmaalka qoyska.
Xulashada tubooyinka musqusha 2320300B
Markaad naqshadaynayso ama aad dib u qaabaynaysid musqushaaga, ma qiyaasi kartid saamaynta tubooyinka musqusha. Kuwani badanaa waxay u badan yihiin waxyaabaha ugu yar ee musqushaada, laakiin si kastaba ha noqotee waa qodobbada diiradda saaraya dabiiciga musqushaada. Qof kasta oo gala musqushaaga, wuxuu si toos ah u eegaa tubooyinka musqusha marka hore. Sidaa darteed waa muhiimadda ugu weyn in la xusho tubooyinka musqushaaga si fiican. Tubooyinka musqusha waxay ku yimaadaan qaabab, qaabab iyo naqshado badan. Doorashada musqulaha qubayska saxda ah ayaa cawaaqib xumo ku noqon doonta dadka qaar. Qubeyska saxda ah ee suuliga ayaa siin kara musqushaada taabashada shaqsiyadeed ee ay runtii ubaahan tahay. Waxay ka dhigi kartaa gebi ahaanba aragtida muuqaalka musqushaada. Laakiin inta ugu badan, tubooyinka qubayska musqusha waa inay u dhigmaan qaabka guud ee musqusha. Sidaa daraadeed waxaad ubaahan kartaa inaad tixgeliso dhammaan dhinacyada tubada qubayska ee aad ku fikirayso inaad doorato. Si kastaba ha noqotee, ha iloobin in qaabeynta ama dib-u-habeynta musqushaada ay inta badan tahay dhacdo xiise leh. Waxaad awood u yeelan kartaa inaad ku qaabeyso musqushaada cusub gebi ahaanba dhadhankaaga. Sidaa darteed aan kaa caawinno suulkeena musqusha madow oo aad u ballaaran.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya tuubada musqusha ee qulqulaya ee baahsan iyo qalabka kale, waa booska gacmaha, kuleyl iyo qabowba. On tubbada musqusha ee baahsan gacmaha ayaa la dhigaa dhinac kasta oo ka mid ah tubada lafteeda. Tusaale ahaan, qasabadaha dhigay bartamaha, waxaad ka faa'iideysanaysaa hal god oo lagu qoday saxanka. Dhinaca kale, hal tuunbo oo keliya tusaale ahaan, waxaad ku xakamayn kartaa biyaha kulul iyo kuwa qabow hal gacan oo keliya. Si waafaqsan, qasabad musqusha oo baahsan waxaad u baahan tahay inaad ku qoddo seddex god godka musqusha waxaadna ku xakameyn doontaa biyaha laba gacan oo kala duwan oo loogu talagalay biyaha kulul iyo kuwa qabowba Taasi waxay sahleysaa in si sax ah loo xakameeyo heerkulka biyaha. Markaad dooraneyso qasabad balaaran oo musqusha ah, waxaa lagu siinayaa xulashooyin kala duwan iyo dhammeystir. Waxaad saameyn culus ku yeelan kartaa qurxintaada midabka madow. Tani waxay hubaal ka dhigeysaa qasabadaada musqusha ee baahsan inay tahay shay indhaha ku qabanaya musqushaada. Ka sokow rabitaankaaga inuu doorto shaqeyn. Maxaad rabtaa in tubbadaada musqusha ee baahsan ay sameyso? Markaad wax dooraneyso, dooro kaliya qasabadda musqusha ee baahsan sida barta muhiimka ah ee naqshadeynta musqusha cusub.
Madow waxay noqon kartaa ikhtiyaar aad u wanaagsan qolkaaga musqusha. Gaar ahaan marka musqushaada ay ku jiraan waxyaabo kale oo madow. Qolka musqusha qulqulka madow ee musqusha ayaa si aan isdaba joog ah ugu dhex qulquli doona inta kale ee qolkaaga musqusha. Sida iska cad waxaad ku beddeli kartaa musqusha musqusha qulqulka madow ee musqusha. Marka ugu horreysa maxaa yeelay tubooyinka buluuga ee baahsan ee musqulaha ah ayaa gaar ah. Maaddaama aysan dad badani ku dhicin inay ku isticmaalaan naqshaddan geesinimada leh musqushahooda, waxaad si gaar ah ugu qarin kartaa qolkaaga musqusha qubayska musqusha ee ballaaran ee WOWOW. Maaha meesha ugu dambeysa maxaa yeelay waxay ku siineysaa dhibicgan diiradda saqafka leh ee musqushaaga meel sare oo dhan oo aan la qiyaasi karin. Qolkaaga musqusha ayaa xaqiiqdi ahaan ka fog heerka caadiga ah iyo tubada musqusha madow ee WOWOW. Shaki la'aan qofkasta oo arka xayawaankiisa gaarka ah ee musqusha, wuu la yaabi doonaa. Meeshii ugu dambaysayna ma aha musqulaha qulqulaya musqulaha madoow ee baahsan ee aad dooratay.
Qaab-dhismeedka kahor waa inaad qaadataa codsi shaqeynaya marka la eego. Waa maxay ujeeddada musqusha quruxda badan ee loo qaabeeyey oo aan wax ka qaban baahiyahaaga? Sida iska cad waxaad go aansataa sida aad u rabto qalabkaaga musqusha inay u adeecaan waxyaabaha aad jeceshahay. Si lamid ah qaybta nashqadeynta, tubooyinka musqulaha ayaa yar yar oo leh saameyn aad u weyn. Taasi waxay si cad u khusaysaa shaqaynta sidoo kale.
Qubayska musqusha ee WOWOW madow ee baahsan ayaa ku habboon musqulaha badankood. Laakiin dabcan waa inay noqotaa hal qayb oo isku xirnaan ah inta hartay naqshadaada musqusha. Sidaas awgeed WOWOW waxay leedahay tubooyinka musqulaha madow ee u dhigma, sida tusaale ahaan tubooyinka qubeyska madow, tubooyinka qubeyska madow iyo tubooyinka musqusha madow. Sidan ayaad qolkaaga musqusha ula jaan qaadi kartaa musqulaha kale ee musqulaha madow. Waxaad ku sameyn doontaa aragti weyn! Ka sokow, tubada buluuga ah ee musqusha ee WOWOW ayaa ku siin doonta waxqabadka aad rabto. Qalabka musqusha ee baahsan ee madow ayaa loogu talagalay in lagu sameeyo qaab casri ah, ugu yar oo wali ah casri wax soo saar oo musqusha ah. Sikastaba ha ahaatee qulqulka musqusha ee baahsan ee WOWOW labadaba waa dhalaalaya oo xariif ah sidoo kale. Qalabka isku-dhafka ah ee isku-dhafan ayaa si dhammaystiran loogu talagalay, oo haddana ku siinaya xakameyn fudud. Qof kasta oo arkaa tuunbadan musqusha madow ee baahsan ayaa la yaabi doonta qaabeynta iyo wax qabadkeeda. Xaqiiqdii waxaa loo qaabeeyey aragti cad oo gaar ah. Qubayska musqusha ee tayada sare leh ee loogu talagalay qubayskaaga, Sida alaabada oo dhan, WOWOW waxay u isticmaashaa qalabka ugufiican tayo ahaan tubadan musqusha. Tan waxaad ku ogaanaysaa tusaale ahaan markaad isticmaaleyso gacanta ku haysa tubadan musqusha. Tayada waxay dammaanad ka qaadaa degenaansho wanaagsan iyo adeegsi cimri dheer. Barta sare ee khaaska ah ee sare waxaa loo qaabeeyey qaab tusaale ahaan dhibicda aan loo kala shaandheynin dhererkeeda awgeed. Dusha sare ee tubadan musqusha waa mid madow, laakiin xirxirayaasha waxaa laga sameeyey naxaas. Alaabada adag ee naxaasta ah ayaa xaqiiqdii ah ikhtiyaar ka fiican marka la barbar dhigo agabka kale ee macdanta. Uma baahnid inaad ka walaacdo tusaale ahaan daxalka. Sidaas darteed waa la damaanad qaaday cimri dhererkiisa musqusha madow ee musqusha. Ka sokow, dusha sare waa la-xoqidda sidoo kale, marka waxaa laguugu damaanad qaadi doonaa muuqaal cusub muddo dheer. Qubayska musqusha ee tayada sare leh ee tayada sare leh ee musqushaaga ayaa noqon doona taabashada dhammeystiran ee naqshadda musqusha.
WOWOW qulqulka qulqulka madow ee musqusha waa fududahay in la rakibo iyada oo la raacayo hage dhaqso ah Biyaha qabow iyo kuwa kulul ayaa si fudud loogu dari karaa isku xiraha dhaqso u rakibidda. Qubeyska musqusha iyo gacmaha waxaad u baahan doontaa seddex god oo kala ah 1 ”-1.5” sagxadda weelkuna waxay noqon kartaa dhumuc 0.2 ”-1.2”. WOWOW tubbada musqusha ee baahsan ee madow waxay noqon kartaa 4 ilaa 16 inji midba midka kale, kaliya iyadoo loo eegayo qaabkaaga. Maaddaama qasabadda madow ee musqusha baahsan ay fududahay in la ilaaliyo sidoo kale, WOWOW kama baqeyso inay bixiso dammaanad 5-sano ah oo ku saabsan alaabteeda. Shayga sidoo kale waxaa lagu daboolay siyaasadiisa 90-maalmood ee soo celinta bilaashka ah. WOWOW waxay ku kalsoon tahay qasabaddeeda musqusha ee baahsan waxayna kaliya ku qanci kartaa qanacsanaanta macaamiisha 100%!
Faa'iidooyinka WOWOW Qasabada Musqusha Fidsan ee Madaw oo kooban:
Bathroom Waxay siinaysaa walxo-walax musqusha kasta
Combination Isku darka gaarka ah ee naqshadaha caadiga ah iyo kuwa casriga ah
● Way fududahay in lagu daro qasabada musqusha kale
Waxay bixisaa shaqeynta ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga
Wuxuu isku daraa esthetics-ka waxqabadka sare
qasabada jikada leh buufiye la soo baxay
qasnadaha madaxa lagu buufiyo qasabada
qasabada jikada hoos u soo jiida
SKU: 2320300B Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: Black, Kala saar gacanta, Hadalka Siiriya, Laba Gacmeed
5-sano oo xadidan oo xadidan
WOWOW 4 Inch Centerset Musqusha Keli Kaliya F ...
La iibiyey: 19
La iibiyey: 67
WOWOW Musqusha Quful Fucet Nickled Wides ...